किन गर्दैछन प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन ? « Postpati – News For All
किन गर्दैछन प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन ?
फागुन २४, काठमाडौँ । सर्वोच्चको आदेशपछि हिजो मात्र रिहा भएका सिके राउत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्न लागेका छन् ।
राउतले देश टुक्र्याउने अभियान त्याग्ने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित हुने कार्यक्रममा गर्ने भएका हुन् । तराई मधेसमा अलग्गै राज्यका लागि आन्दोलनरत सिके राउतले विखण्डनको राजनीति छाडेर मुलधारको राजनीतिमा समाहित हुने पुष्टि उनका सहयोगी डा. विनय पञ्जियारले पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले पनि राष्ट्रिय सभा गृहबाट सिके राउतसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
पृथकतावादी राजनीति छाडेसँगै राउतले तत्काल नयाँ पार्टी दर्ता अघि बढाउने भएका छन् । राउतले आफूसँग ३० हजार भन्दा धेरै सक्रिय सहयोगी रहेको र लाखौँ सदस्य रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिजो मात्रै रिहा भएका राउतलाई सरकारले एकजना सुरक्षाकर्मी पनि उपलब्ध गराएको छ ।